Umvelisi weGorm Gear | Umgangatho ophezulu kunye netekhnoloji ephezulu-Ngamandla onke
Ikhaya / gear / Isixhobo seentshulube
Izixhobo zeentshulube zihlala zisetyenziswa xa kufuneka ukunciphisa ngesantya esikhulu. Umlinganiselo wokuncitshiswa umiselwa linani lokuqala kwentshulube kunye nenani lamazinyo kwizixhobo zentshulube. Kodwa izixhobo zeentshulube zinee-sliding zoqhakamshelwano ezithe cwaka kodwa zihlala zivelisa ubushushu kwaye zinokuhambisa okuncinci.
Izixhobo ezininzi zentshulube zinepropathi enomdla engenayo enye iseti yegiya: umbungu unokujika ngokulula iigiya, kodwa izixhobo azinakujika umbungu. Kungenxa yokuba i-engile yombungu ayinzulu kangangokuba xa igiya izama ukuyijikeleza, ukungavisisani phakathi kwegiya kunye nombungu kubamba umbungu endaweni.
Eli nqaku liluncedo koomatshini abafana neenkqubo zokuhambisa, apho uphawu lokutshixa lunokusebenza njengesiqhoboshi sokuhambisa xa imoto ingajiki. Enye into enomdla kakhulu ekusebenziseni izixhobo zentshulube isetyenziswa kwezinye iimoto ezikumgangatho ophezulu kunye neelori.
Ngokubhekisele kwizixhobo zemveliso, ngokubanzi, umbungu wenziwe ngentsimbi eqinileyo ngelixa izixhobo zeentshulube zenziwe ngentsimbi ethambileyo efana nealuminium bronze. Kungenxa yokuba inani lamazinyo kwizixhobo zentshulube liphezulu ngokuthelekiswa nombungu kunye nenani lokuqalisa ukuba liqhele ukuba li-1 kuye ku-4, ngokunciphisa ubunzima bokuqina kwentshulube, ukubetheka kumazinyo empethu kuyancitshiswa. Olunye uphawu lokuvelisa iintshulube yimfuno yomatshini okhethekileyo wokusika iigiya kunye nokuguba kwamazinyo kweentshulube. Kwelinye icala, izixhobo zeentshulube zingenziwa ngomatshini wokuqhekeza osetyenziselwa izixhobo zokukhuthaza. Kodwa ngenxa yemeko yamazinyo eyahlukileyo, akunakwenzeka ukuba usike iigi ezininzi ngaxeshanye ngokungqinisisa izithuba ezingenanto ezinokwenziwa ngegiya yokukhuthaza.
Izicelo zegiya zentshulube zibandakanya iibhokisi zegiya, iipali zokuloba iipali, izikhonkwane zokulungisa umtya wekatala, nalapho kufuneka kwenziwe uhlengahlengiso olukhawulezayo kwisantya sokusebenzisa isantya esikhulu. Ngelixa unako ukujikeleza izixhobo zentshulube ngombungu, kuhlala kungenakwenzeka ukujikeleza umbungu usebenzisa izixhobo zentshulube. Oku kubizwa ngokuba yinto yokutshixa ngokwakho. Umsebenzi wokutshixa awunakuhlala uqinisekile kwaye indlela eyahlukileyo iyacetyiswa kuthintelo oluqinisekileyo lokubuya umva.
Kukho kwakhona uhlobo lweentshulube zeduplex. Xa usebenzisa ezi zinto, kunokwenzeka ukuba uhlengahlengise ukubuyela umva, njengaxa amazinyo enxibe afuna ukulungiswa kohlengahlengiso, ngaphandle kokufuna utshintsho kumgama osembindini. Akukho baninzi kakhulu abavelisi abanokuvelisa olu hlobo lweentshulube.
Izixhobo zeentshulube zibizwa ngokuba livili leentshulube.
Ibonisa i-1-32 yeziphumo ezingama-58
iseti yeentshulube ezincinci
pinion nezixhobo worm
iiseti zeentshulube ezincinci
ivili umbungu gear
izixhobo ukuqala iintshulube
impethu yokugubungela kabini
izixhobo zombungu ezifakwe kabini
ukuqala kabini izixhobo zentshulube
cnc izixhobo intshulube
Abenzi bevili leentshulube
izixhobo zentshulube yesiqhelo
Izixhobo zentshulube ezigubungelayo
izixhobo zokuqala iintshulube
izixhobo intsimbi intsimbi
Iphindwe kabini i-Worm Gear
Iigiya zentshulube yeetriki
igubungele izixhobo zentshulube
izixhobo iintshulube manual
umbungu izixhobo wabulala drive
Ivili leentshulube kunye nesikhondo seentshulube
umbungu kunye pinion nezixhobo
Iyunithi yezixhobo zentshulube
ngqo umbungu izixhobo
Izixhobo zentshulube ye-diy
izixhobo zentshulube ye-globoid
nema 23 izixhobo iintshulube
nema 17 izixhobo iintshulube